२२ हप्तामै शिशुको जन्म – Himal FM 90.2 MHz
२२ हप्तामै शिशुको जन्म
स्थानीय समाचार adminhimal September 8, 2019
सोलुखुम्बु, भदौ २२
सोलुखुम्बुमा एक महिलाले गर्भ बसेको करिब ६ महिनामै शिशु जन्माएकी छिन् । सामान्यतया ९ महिनामा जन्मने शिशु थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका ५ जुबुकी २० बर्षिय सुस्मा बस्नेतले गर्भ बसेको २२ हप्तामै शिशुलाई जन्म दिएकी हुन् ।
सुत्केरी व्यथाले च्यापेपछि शुक्रबार विहानपख जिल्ला अस्पताल फाप्लु आईपुगेकी उनले ४ बजेर ५० मिनेट जाँदा सामान्य रुपमा शिशुलाई जन्म दिएको अस्पतालका प्रमुख डा. रमिन महर्जनले जानकारी दिए । जन्मदा शिशुको तौल मात्र ९ सय ग्राम रहेको थियो । गर्भावस्थाको उमेर नपुग्दै जन्मेको शिशुलाई अहिले एनआईसियूमा अक्सिजन, सलाईन र औषधि दिएर राखिएको छ । आमाको अवस्था सामान्य रहेको डा. महर्जनले बताए ।
प्रि–म्याच्यूड लेबरमा जन्मिएको शिशुको फोक्सो लगायतका अंगको विकास नभएकाले एनआईसियूमा राखिएको अस्पतालले जनाएको छ । शनिबार सम्ममा शिशुको एक सय ग्राम तौल बृद्धि भईसकेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । प्रमुख डा. महर्जनले भने, ‘जिल्लामा बाल विशेषत्र छैन् । राजधानी लैजान परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले जिल्लामै उपचार गरिरहेका छौ ।’ नेपालमै ६ सय ग्रामसम्मको शिशु बचाउन सफल रहेको उदाहरणले नवजात शिशुलाई बचाउन सकिने आशा छ तर यसै भन्न नसक्ने महर्जनको भनाई छ ।
शिशुको अहिले जिल्ला अस्पतालमा निशुल्क उपचार भईरहेको छ । शिशुको आमाको भने डिस्चार्ज भईसकेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘बाहिरी संसारमा बाच्न सक्ने गरि अंगहरुको विकास हुनुपर्ने भएकाले एनआईसियूमा कति समय राख्नुपर्ने भन्ने विषय तोक्न सक्दैनौ ।’ डा. महर्जनले भने । उमेर नपुग्दै प्रसुती हुनुको कारण किटान गरेर भन्न नसक्ने अस्पतालका चिकित्सकले बताएका छन् ।